Anand Patel, MD (2016) မှလူငယ်များ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုခံစားနေရသည့်အမှန်တကယ်အကြောင်းရင်း - Your Brain On Porn
အခြို့သောအဘို့, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းလိင်ရှိသည်ဖို့ drive ကိုအစားထိုးထားပါတယ်, ဒေါက်တာ Anand Patel ကထုတ်ဖော်ပြသ (ဆောင်းပါးလင့်ခ်)
Anand Patel က7စက်တင်ဘာလ 2016 အားဖြင့်
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုညာဘက်တစ်ဦးလူဟောင်းပြဿနာနှင့်တူအသံ? မှားယွင်းနေ။ တွေ့ရှိခဲ့မကြာသေးမီကအီတလီလေ့လာမှု ပြင်းထန် erectile ပြဿနာများနှင့်အတူအားလုံးအသစ်ကလူနာ 25% 40 အောက်မှာ ရှိ..
erectile ပြဿနာများ၏ပုံမှန်အတိုင်းအကြောင်းတရားများမရှိဘဲကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျန်းမာယောက်ျား, အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်အထက်အသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်ဖြစ်ပေါ်ရသောအစောပိုင်းနှလုံးရောဂါကဲ့သို့ up ပြုလုပ်ရဖို့ရုန်းကန်: ဒီပိုဆရာဝန်များကိုမြင်လျှင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုအား။
ဒီတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆေးလိပ်သောက်မှုတို့သည်အပြစ်ရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်းညစ်ညမ်းမှုနှုန်းသည်အသက် ၄၀ အောက်လူငယ်များတွင်သိသိသာသာမြင့်မားသည်။
porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု
ဘာကြောင့်လူတချို့ဘာကြောင့်တီထွင်ရတာလဲဆိုတာကိုငါတို့စတင်ဖော်ထုတ်နေပြီ 'porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု'သို့မဟုတ် PIED ။ ဒီအဖွဲ့အတွက်လိင်ကိစ္စဟာစစ်မှန်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုအစားထိုးပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။
dopamine လို့ခေါ်တဲ့ ဦး နှောက်ကဓာတုဗေဒကကျွန်တော်တို့ကိုအစားအစာရှာဖို့နဲ့မိတ်လိုက်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုသောလှုပ်ရှားမှုများအတွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သည် လိင်မှုကိစ္စတွင်အစာစားခြင်း (သို့) လမ်းလျှောက်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအပျော်အပါးများထက်များစွာထုတ်လွှတ်လိုက်သော dopamine ပမာဏသည်ပိုမိုများပြားသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေရဲ့ရှင်သန်မှုကိုသေချာစေတာထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာမရှိသင့်လို့ပဲ။ အစာစားချိန်သည်အရေးကြီးသည်။ သင့်ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဦးနှောက်အဘို့, ဘာမျှမလိင် beats.
အဝတ်အချည်းစည်းရှိရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းကအမှန်ပင်ပျော်စရာကောင်းသည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ကိုဆုချသောသဘာဝ ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းကိုအစားထိုးရန်မလုံလောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကွဲပြားခြားနားကြသည်; လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အသစ်ကပြောင်းလဲနေတဲ့ပုံရိပ်တွေရှိပါတယ်။
ဦးနှောက်ကိုသငျသညျ porn အမျိုးမျိုးကိုရယူရန်အဖြစ်ဖြန့်ချိဖို့စတင်ကြောင်း dopamine ၏မြင့်အဆင့်ဆင့်ကဒီကယ့်ကိုအကြိုးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသငျသညျအထပျထကလုပျသငျ့ကွောငျးသင့်ရဲ့စရိုက်ကဦးနှောက်ကိုပြောပြတယ်။
အဲဒါကြောင့်ပဲ အချို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကနောက်ဆုံးမှာအမှန်တကယ်လိင်မှအင်တာနက်ညစ်ညမ်းပိုနှစ်သက်။ ထို့အပြင်သင်သည်များစွာသောစွဲလမ်းမှုများကဲ့သို့ပင်ယခင်ကပျော်စရာကောင်းသောလုပ်ရပ်များနှင့်အတူသင် ပို၍ ပျော်မွေ့လာသည် - ထို့ကြောင့်ရှာဖွေမှုသည်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်သည်။
ညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံသည်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်များစွာခြားနားသည်။ အဘယ်ကြောင့်?
ပထမ ဦး စွာပထမ ဦး စွာသင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံတစ်ခု (ဥပမာ၊ Playboy မှအဝတ်အချည်းစည်းရှိသောအမျိုးသမီး) ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမျိုးသားများသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများပေါ်ပေါက်လာသည့်တုန့်ပြန်မှုများနှင့်မတူဘဲ၊ လက်တွေ့တွင်လိင်မှုဆိုင်ရာတွန်းအားကိုကျော်လွှားရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာလုံလောက်သော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ထိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကွဲပြားသောချုပ်ကိုင်မှုပုံစံကိုအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးလိင်တံ၏မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းကိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ မကြာခဏပါပဲ ယောက်ျားလိင်ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏စိုက်ထူဆုံးရှုံးအဘယ်ကြောင့် သို့မဟုတ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမရှိဘဲအော်ဂဇင်မရရှိနိုင်ခြင်း။ သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကဖိအားပေးမှုနှင့်ခံစားမှုပိုမိုမြင့်မားစေဖို့နဲ့အော်ဂဇင်ကိုရရှိရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားပေးမှုနှင့်အာရုံခံမှုအဆင့်များလိုအပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်သင်နှင့်အတူအကြီးအလိင်ဆက်ဆံသော်လည်းဆွဲဆောင်မှုဖက်နဲ့စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပျက်ကွက်နိုင်ပါတယ်.
အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အတွက်မူ၎င်းသည်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည် - တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့အိမ်ထောင်ဖက်သည်ကိစ္စတစ်ခုရှိသည်ဟုခံစားရသည်ဟုခံစားရခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လုံလောက်သောဆွဲဆောင်မှုမရှိဟုခံစားရသည်။
porn စောစောထိတွေ့လေ့လာမှုများ (US မှာကောက်ယူအထူးသဖြင့်သူတို့အား) အရသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုနှုန်းကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာသင်ကြားမှုကိုသင်ကြားပေးခြင်းမှကျွန်ုပ်သည် ပိုမို၍ မျှော်လင့်ချက်ရှိသည် အမြိုးသမီးမြား hairless အလောင်းတွေရှိသည်, ယောက်ျားကြီးမား penises ရှိ ဒါ့အပြင်စအိုလိင်နဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်မျက်နှာကိုသန္ဓေတည်အောင်လုပ်ခြင်းဟာပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ အချို့ဆရာဝန်များက peyronie ၏ရောဂါများသည်အမာရွတ်များကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအမြှေးပါးများပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းအရင်းမှာလူငယ်များသည်ပြင်းထန်စွာထိုးဖောက်နေသောလူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုမှတက်ကြွနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်သင်သည် 'စစ်မှန်သော' လိင်ကိုကြိုးစားလုပ်ပါက dopamine ဆုသည်ပိုမိုနိမ့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဦး နှောက်မှကျောရိုးသို့ဆင်းသောလိင်တံသို့အချက်ပြမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
ပြီးတော့သင့်ရဲ့လိင်တံကိုအာရုံကြောများဖြစ်ပေါ်မှုနည်းလာရင်သွေးစီးဆင်းမှုနည်းသွားရင်လိင်အင်္ဂါပြproblemနာထက် ဦး နှောက်အားနည်းလာတယ်။
ထို့နောက်အမျိုးသားများစွာသည်၎င်းတို့၏လိင်တံကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကူညီရန်ဆေးကိုသောက်ကြသည်။ Viagra သည်အာရုံကြောများလုံလုံလောက်လောက်ရှိခြင်းဖြင့်လိင်အင်္ဂါသွေးစီးဆင်းမှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးသောကြောင့်သင့် ဦး နှောက်ကိုသေနတ်ဖြင့်ပစ်ရန်လိုအပ်သည် - သူတို့သည်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါ - သို့မဟုတ်ကြာမြင့်စွာ။
penile rehab နှင့်အတူသံသရာကိုချိုး
ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသင်ဤသံသရာဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့် PIED ထဲကခြိုးဖောကျသလဲ?
မဆိုစွဲသငျသညျအလိုတခုတည်းအဖြစ် PIED တူညီစှာဆကျဆံ: ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုရပ်တန့်။ ၎င်းတွင်လိင်စိတ်နှိုးဆွသောစာပေများအပါအ ၀ င်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများမပါ ၀ င်ပါ။ ဤပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ပြင်းထန်စွာထိခိုက်သောလူအချို့အတွက် Instagram ပေါ်ရှိအ ၀ တ်မရှိသောအလောင်းများပါဝင်သည်။ ထိုသို့ပြုရန်ခက်ခဲသည်၊ အထူးသဖြင့်ပထမရက်အနည်းငယ်မှာတပ်မက်ခြင်းမှာအလွန်ပြင်းထန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်ဤရွေ့ကားလျင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊
အမျိုးသားများအနေဖြင့်များသောအားဖြင့်အမျိုးသားများသည်များသောအားဖြင့်၎င်းနောက်တွင်၎င်းတို့သည်သူတို့၏လိင်စိတ်ကိုဆုံးရှုံးစေသည့်ကာလရှိကြောင်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုများသောအခါ၌ပုံမှန်ထက်ပိုမိုသေးငယ်ကြောင်းသတိပြုမိကြသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ညစ်ညမ်းစေတဲ့ဆားကစ်တွေကနေကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကိုမြှင့်တင်ဖို့ကျောရိုးအောက်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီး ဦး နှောက်ကအာရုံကြောကိုနှိုးဆွပေးနိုင်တာမဟုတ်လို့ပဲ။
ဤကာလသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှကြာရှည်နိုင်ပြီးယောက်ျားများသည်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်သောကြောင့် porn သို့ပြန်လာလေ့ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သင့် ဦး နှောက်တွင်ညစ်ညမ်းသောသွေးလှည့်ပတ်မှုနှုန်းသည်အသုံးပြုမှုမရှိခြင်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းနှင့် dopamine ပမာဏနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်ဤအဆင့်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းတို့ရှိနေသည်။
သင်တစ်လပြီးတစ်လလပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်ပြီးတစ်ခါအစပျိုးပေးခဲ့သောဤညစ်ညမ်းမှုအခြေခံသည့် ဦး နှောက်ဆားကစ်ကိုဖျက်သိမ်းရန်လိုအပ်ပြီးဆားကစ်အဟောင်းများကိုပြန်လည်ပစ်ခတ်သင့်သည်။
ပြီးတော့သင် porn ကြည့်တာကြာပြီ၊ အထူးသဖြင့်သင်ငယ်တဲ့အရွယ်ကပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ယူရမယ်ဆိုတာကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့နံနက်စိုက်ထူ, အလိုဆန္ဒနှင့်အပင်ပြန်သွားဖို့ကိုစတင်ကောက်ကာငင်ကာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းစိုက်ထူ။ အစစ်အမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များအတွက်အလိုဆန္ဒနောက်ကျောလာရန်စတင်.
အခြားသူများကလပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည် - နောက်တစ်ခါအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကစတင်အသုံးပြုခဲ့သူများနှင့်၎င်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခဲ့သူများသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အနှေးဆုံးဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းကနေဆုတ်ခွာဖို့ခက်ခဲသည်နေတုန်း, သာမန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် erectile function ကို၏ပြန်လာဆေးဝါးမပါဘဲလုံးဝဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၎င်းသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည် - အချို့သောလူနာများသည်အလွန်အပူတပြင်းရှိပြီး Viagra ကဲ့သို့ဆေးပြားများ၏ကျဆင်းခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသိသာထင်ရှားသော ED နှင့် ၄ င်းတို့အားခွဲစိတ်သည့် penile implants များကမ်းလှမ်းထားသည်။
ဒီစဉ်မှာဖြစ်ကောင်းဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်ခွန်အားမရှိခြင်း၏အစစ်အမှန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှာဖွေစူးစမ်းကြသည်မဟုတ်, လူနာသေးငယ်တဲ့အလွန်ကို select လုပ်ပါအုပ်စုတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
ညစ်ညမ်းတဲ့အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုသံသရာကနေထွက်လာပြီးအမှန်တရားကိုပြန်ရနိုင်ဖို့ခက်ခဲပေမယ့်အဲဒါကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များ yourbrainonporn.com PIED ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တယ်။ သင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ - areasရိယာအများစုသည် NHS တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်ကုသသူများရှိသည် PIED နှင့်ကူညီနိုင်သည် www.sexmedicine.co.uk ။